Hordhac Ganacsi - Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.
Maaddaama ay tahay shirkad Sino-shisheeye ah oo saynis-teknoolojiyad wadaag ah oo ku takhasustay Shiinaha oo ku takhasustay R&D, soo saarista iyo qaybinta algae hydrocolloids, Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd., waxaa la aasaasay 1990 iyadoo ay weheliso warshad weyn oo agar iyo carrageenan ah oo wajaheysa gudaha iyo dibedda suuqyada.
Adoo adeegsanaya dhirta badaha ee ka kala socota Indonesia iyo Shiinaha sida alaabta ceeriin, Fujian Global Ocean waxay ku tiirsan tahay tiknoolajiyadeeda horumarsan ee casriga ah iyo tiknoolajiyadda soo saarista oo la hagaajiyay si loo soo saaro wax soo saar kasta oo tayo sare leh; waxyaabahayaga waawayn waa agar darajooyinka cuntada, agar bakteeriyoolaji ah, agar dag dag ah, carrageenan, agaro-oligosaccharide iyo wax soosaarkooda iskudarka, wadarta guud ee waxsoosaarka sanadlaha ah wuxuu awoodaa ilaa 3000 tan. Waxyaabahayagu waxay idman yihiin ISO, HALAL iyo KOSHER, sidoo kale waxay la kulmi karaan heerarka qaranka Shiinaha iyo heerarka EU, oo si fiican loogu iibiyay Shiinaha oo dhan loona dhoofiyey gobollada Koonfur-bari Aasiya, Yurub iyo Ameerika, iwm.
Iyadoo fure u ah ganacsiga muujinta barnoolajiyada ganacsiga ee Shiinaha, Fujian Global Ocean waxay qabatay oo aasaastay iskaashi ballaadhan oo qoto dheer iyo is-weydaarsiga machad cilmi-baaris oo ballaaran iyo machadyo tacliin sare dalka iyo dibaddaba; wax soo saarkeeda xirfadeed iyo suuq caalami ah ayaa ka dhigeysa shirkadda inay ku guuleysato amaanta macaamiisha iyo garashada had iyo jeer.
Adoo raacaya dareenka bulshada ee masuuliyada, adoo kusameynaya kasbashada hal-abuurnimo iyo horumar, iyo ceyrsashada tayada ugu fiican uguna fiican adeegga, Fujian Global Ocean waxay u heellan tahay bixinta macaamiisha gudaha iyo dibaddaba alaabada iyo adeegyada taxanaha ah ee caafimaadka, caafimaadka iyo deegaanka leh